लमजुङमा घाँस दाउरा गर्दै हुर्किएकी जमुना कसरी बनिन् अष्ट्रेलियाको सबैभन्दा धनी महिला ? – Complete Nepali News Portal
लमजुङमा घाँस दाउरा गर्दै हुर्किएकी जमुना कसरी बनिन् अष्ट्रेलियाको सबैभन्दा धनी महिला ?
October 16, 2017	612 Views
जमुना गुरुङ घलेको पहिलो परिचय एनआरएनएमा लामो समय नेतृत्व सम्हालेका शेष घलेकी श्रीमति हुन् । तर उनको परिचय यतिले मात्र पुरा हुदैन । उनको आफ्नै अस्थित्व र परिचय छ । जमुनाले ब्यवसायीक रुपमा आफुलाई एउटा सफल महिलाका रुपमा स्थापित गरेकी छन् ।
अष्ट्रेलियामा बस्ने जमुना गुरुङ घले अष्ट्रेलियाका आठौं धनी महिलाको सूचीमा पर्न सफल भएकी महिला हुन् । अष्ट्रेलियाका धनाढ्यहरुको सूची प्रकाशन गर्ने ‘बीआरडब्लु म्यागेजिन’ ले गुरुङलाई सन् २०१५ का सर्वार्धक धनी महिलाको सूचीमा आठौं नम्बरमा राखेको थियो ।
उनको ब्यवसायले अष्ट्रेलियामा राम्रो सफलता पाएको छ । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि पति शेष घलेसंगै अष्ट्रेलिया पुगेकी जमुना त्यहां अध्ययनमा मात्र सिमित रहिनन् । ब्यवासाय सुरु गरेर आफ्नोपरिचयको दायरालाई फराकिलो बनाइन् । लमजुङमा जन्मिएकी उच्च शिक्षाका लागि सन् १९९१ मा अष्ट्रेलिया पुगेका थिइन् । उनले पति शेषलाई जिवनका हर मोडमा वरावरको साझेदारी गरीन् । चाहे त्यो पारीवारीक दायित्व होस् वा ब्यवासायीक । पतिसंगैको साझेदारीमा उनले ब्यावसायीक जिवनमा एमआईटी कलेजको स्थापना गरेर हात हालिन् ।
उनी विवाह पुर्व लमजुङ मा अन्य सामान्य महिला जस्तै घाँस दाउरा गरेर हुर्किएकी हुन् । पढाइको महत्व बुझेकी जमुना घाँस दाउराको काम सकेर विद्यालय पढ्न जान्थिन् । झण्डै २० अर्व रुपैयाकी मालिक जमुना अष्ट्रेलियामा सबैभन्दा धेरै आम्दानी गर्ने महिलाहरुमा पर्छिन ।
अष्ट्रेलियाको मेलवर्न र सिड्नीमा महत्वपूर्ण पुरातात्विक महत्वका भवनको स्वामित्व घलेको जोडिले लिएको छ । त्यस वाहेक नेपालमा पनि जमुनाको लगानी छ । नेपालमा स्वास्थ्य र शिक्षामा योगदान पुर्याउने उद्येश्यले एक अर्ब रुपैयाँको परोपकारी कोषको घोषणा गरेका समेत छन् । जमुना घलेले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) मा महिला सशक्तीकरण र सहभागितालाई प्राथमिकतामा राख्छिन् ।
पति शेष घलेसँगको साझेदारीमा उनले मेलवर्नमा ‘मेलवर्न इन्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एमआइटी)’ कलेज सञ्चालन गरिरहेकी छिन्। उनी त्यसको प्रबन्धक हुन्। कलेजको स्थापनासँगै उनीहरुको सम्वृद्धि यात्रा अघि बढेको हो। जमुनाको सम्पत्तिको महत्वपूर्ण हिस्सा यही कलेजको आम्दानी रहेको म्यागेजिनले बताएको थिया । जमुना एमआईटी ग्रुप होल्डिङ्स मार्फत् काठमाडौंमा निर्माण सुरु भएको ‘सेराटन काठमाडौं होटल’की मुख्य साझेदार पनि हुन् । जमुना व्यवसाय वा समाजसेवामा आफ्नै पहिचान बनाएकी एक महिला हुन् ।